Instagram ayaa kuu oggolaan doonta inaad si dhakhso leh ugu aragto sheekooyinka qeybta webka | Androidsis
Instagram waxay u shaqeysaa qaab cusub si looga daawado sheekooyinka biraawsarka
Facebook ma joojinayo soo saarista astaamo cusub si uu uga faa’iideysto shabakaddiisa sawir qaadashada bulshada. Waxaan horey u haysannay nooca Lite Codsigan, haddana waa marki la bilaabayo hawl cusub oo dhowaan iman doonta Instagram.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waa weyn ee barnaamijka ayaa ahaa ballanqaadkiisa adag ee 100% siyaasadda moobiilka. Instagram waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo taleefan, kumbuyuutar looma isticmaalo. In kasta oo arimuhu sida ugu dhaqsaha badan isu beddeli karaan
Instagram ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku aragto Sheekooyinka ku jira boggeeda internetka
Waana in Instagram ay ku shaqeyso qaab cusub oo kuu oggolaanaya inaad ku daawato sheekooyinka daalacayaasha shabakadda. Runtu waxay tahay in dadka isticmaala badankood ay u adeegsadaan mobilada si ay u daawadaan sheekooyinka, laakiin fikradda ah inaad awood u yeelatid inaad ku aragtid cunsurkan biraawsar kasta, adigoon adeegsan barnaamijka, waa faahfaahin si loo tixgeliyo.
Dhanka kale, waxay umuuqataa in qaar kamid ah isticmaaleyaashu ay awoodeen inay ku arkaan shaqadan cusub qaabka webka waxayna bilaabeen inay daabacaan sawirro halka qaabka hadda jira si faahfaahsan loogu arki karo. Sida aad ku aragto sawirka hogaaminaya xariiqyadan, the sheekada dhexe waxaa ku wareegsan looxyo madow markaa ma ogid waxa soo socda
Marka laga hadlayo hagida, ma jiraan wax isbeddello muuqda ah. Sidan oo kale, waxaan ku hakin karnaa sheekooyinka xitaa haddii ay leeyihiin fiidiyow adoo gujinaya jiirka mid kasta oo ka mid ah, marka lagu daro inaan awoodno inaan ka boodno sheekooyinka ama isticmaalayaasha. Waxaad dhahdaa in qaabkan cusub ee 'Instagram' uu ku imaan doono qaab jaahwareer ah, marka hadda wuxuu kaliya u shaqeeyaa isticmaalayaasha qaarkood.
Hadda waxaan kaliya u baahanahay inaan dulqaadno oo aan sugno cusbooneysiintan in lagu sii daayo adduunka si looga faa'iideysto Instagram, tan iyo markii aan u maleynay inay ahayd fikrad runtii xiiso leh. Xaqiiqdiina dhaqdhaqaaqan ayaa adeegsadeyaal badani ku khamaari doonaan nooca websaydhka ee barxadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Instagram waxay u shaqeysaa qaab cusub si looga daawado sheekooyinka biraawsarka
Dib-u-eegista fiidiyowga ugu horreeya ee Galaxy Buds Pro
Jijin sharafeedka OnePlus waxaa la soo bandhigi doonaa Janaayo 11